LA YAAB: ”Wadnihiisii ayuu karsaday oo cunay!” – Dood ka taagan nin DAD QAL AH oo lagu sii daayo jidadka Jarmanka + Sawirradiisa | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka LA YAAB: ”Wadnihiisii ayuu karsaday oo cunay!” – Dood ka taagan nin...
LA YAAB: ”Wadnihiisii ayuu karsaday oo cunay!” – Dood ka taagan nin DAD QAL AH oo lagu sii daayo jidadka Jarmanka + Sawirradiisa
(Frankfurt) 12 Maajo 2020 – Nin dad cun ah oo Jarmal ah oo lagu sheegay nin dusha sare ka ah ‘mid fiican oo asluub badan’ isla markaana qalay oo cunay nin ay khadka iska barteen ayaa loo ogolaaday inuu bannaanka usoo boxo.
Ninkan oo lagu magacaabo Armin Meiwes, oo 58-jir ah, ayaa inta koofiyad iyo ookiyaalo dugul ah oo uu isku qarinayo gashado ayuu wuxuu u dhaqaaqayaa gobol kale oo Jarmanka ah.
Waxaana deeto raaca oo gaariga ku wada laba sarkaal oo la daba dhigay amaanka dartii, maadaama weli laga shakisan yahay, sida ay booliisku u sheegeen BILD.
Ninkan dad cunka ah ayaa Maarso 2001 wuxuu wadnaha toorreey kala dhacay Bernd Brandes, 43-jir, kaddibna isla wadnihii ayuu shiishay isagoo ku daray cusbo, basbaas, tuun iyo geedo kale kahor intaanu ku cashaynin, sida uu ninku qirtay.
YAA DOONAYA IN LA DILO OO DEETO LA CUNO?
Labada nin ayaa khadka isku bartay kaddib markii uu Meiwes soo geliyey iidheh u dhigan inuu doonayo qof diyaar u ah in ”la dilo kaddibna la cuno”, isagoo webkiisa The Cannibal Cafe soo dhigay, kuna sii qoray afeef ah in ay dadku kala saaraan ”dhab iyo dheel”, si aan Dowladdu uga shakin.
Laba qof oo ninkan ka horreeysey ayuu midka koowaad iska diidey, halka uu midka 2-aad doonayey in inta masaamiir meel lagula dhejiyo kaddibna garaacis nafta looga qaado, taasoo uu Meiwes u arkay ‘mid yara waalli ah.’
Mr Brandes-ka la cunay ayaa deeto la kulmay Meiwes, oo ah farsamo yaqaan kombiyuutar, iyadoo ay isku arkeen guri beereed ay hooyadii leedahay oo ku yaalla Rotenburg, galbeedka gobolka Hesse.
Waxay tageen qol loogu tala galay inuu dilku ka dhoco, iyadoo ay la yaab lahayd in Mr Brandes, oo qaatay 20 xabbo oo ah kaniiniga xanuun dilaha ahi uu doonayey inuu hilibkiisa wax ka cuno.
Yeelkeede, Mr Brandes ayuu qalay kaddibna wuxuu ku kaydsaday qaboojiyaha hilibka isagoo cunayey dhowr bilood.
Meiwes oo bishii Diseembar 2017-kii bilaabay dood sharci ah oo ku saabsan in xabsiga laga sii daayo ayay booliisku iminka ogolaadeen in uu si KMG ah bannaanka ugu boxo iyada oo la ilaalinayo, taasoo ay ka digeen dadka yaqaan cilmu-nafsiga oo sheegay in ninkanu aanu ka shallaayin waxa uu sameeyay, markalena uu samayn karo.
Waxaa doodihiisa ka mid ah sida dembi loogu arki karo kiiskan maadaama qofka uu cunay uu ahaa ”mid ogaa oo ogolaa in la cuno” iyo sida ay taasi dil ku tahay sharci ahaan?
Ninkan oo 2006 lagu xukumay xabsi daa’in ayaa 2014 waxaa kiiskiisa dilka ah loo bedeley mid ”kama” ah, goortaasoo lagu xukumay 8.5 sano.
Previous article”Halla daldalo!” – Booliiska Milano oo baaritaan ku bilaabay hanjabaado dil ah oo ku socda Silvia Romano
Next articleSida ay Fahad Yaasiin, Mire Indha-Yare, Turkiga & Qadar ay gacan uga gaysteen soo daynta Silvia Romano oo la kashifay